AVIADEV AFRICA 2020, HAHEMOTRA NOHO NY CORONAVIRUS - Ravinala Airports
AVIADEV AFRICA 2020, HAHEMOTRA NOHO NY CORONAVIRUS
Raha novinavinaina hatao ny volana mey 2020 teto Madagasikara ny hetsika Aviadev karakarain’ny Ravinala Airports, eo ambanin’ny fiahian’ny Minisiteran’ny Fitaterana sy ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetrandro, dia hahemotra amin’ny 28 ka hatramin’ny 30 septambra 2020 izao izany noho ny fiparitahan’ny « coronavirus » maneran-tany. Izao fanapahan-kevitra izao dia noraisina mba hifehezana ny fiparitahan’ny aretina izay mamely ny kaontinanta rehetra ankehitriny.
Noho ny fahatsapan’ireo mpisehatra rehetra amin’ity hetsika ity fa zava-dehibe ny fiarovana ny fahasalaman’ny tsirairay, dia nanapa-kevitra ny mpikarakara fa ahemotra amin’ny fotoana mahamety azy izany hetsika izany. Maro rahateo ireo karazana seho sy hetsika iraisam-pirenena sahala amin’ny Aviadev Africa izay nahemotra na nofoanana mihitsy noho io antony io.
AviaDev Africa dia hetsika ivondronan’ireo kaompaniam-pitaterana an’abakabaka, seranam-piaramanidina ary mpisehatra eo amin’ny lafiny fizahan-tany, mifanakalo sy mifampizara mahakasika ny fitomboan’ny sidina manerana an’i Afrika, ary mampiroborobo ny fifandraisana eo amin’ireo toerana eto amin’ny kaontinanta.
Tamin’ny alalan’ity hetsika Aviadev Africa ity no nahafahan’ny firenena maro nanokatra làlana an’abakabaka toa ny fisokafan’ny sidina miainga eo amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Lanseria, Johannesburg, makany amin’ny Port Elizabeth, tamin’ny volana jolay 2019, izay nataon’ny Mango, ary koa ny fisokafan’ny sidina mampitohy an’ny Kigali-Harare-Le Cap, izay notontosain’ny RwandAir nanomboka ny volana mey 2018.
Hatramin’izao dia kaompaniam-pitaterana an’anabakabaka mihaotra ny 20 no nanamafy ny fahatongavany eto Madagasikara hanatrika io hetsika io. Hampahitana azy ireo mandritra io fotoana io ny hakanton’i Madagasikara. Fotoana iray ihany koa izy io ahafahan’ny mpisehatra eo amin’ny lafiny fizahan-tany sy an’anabakabaka mivondrona hisintonana kaompania ho avy eto Madagasikara izy io. Manampy amin’ny fanatrarana ny tanjon’ny fanjakana malagasy amin’ny fisintonana mpizahan-tany 500 000 eto Madagasikara ka hatramin’ny taona 2023 ny hetsika toa ny Aviadev Africa.